ब्रेटन क्रीम - थर्मोमिक्स रेसिपी | थर्मो रेसिपीहरू
Cremas15 मिनेट3 व्यक्ति
यो ब्रेटन क्रीम यति छिटो छ कि केवल 15 मिनेटमा तपाईंसँग टेबलमा सेवा गर्न फलफूलमा आधारित डिश हुनेछ।
यो नुस्खालाई केवल राम्रो पहिलो सलाद चाहिन्छ र हामीसँग पहिले नै हुनेछ पौष्टिक खाना, सबै राम्रो संग कि फलफूलहरू र तरकारीहरू।
म सँधै रेसिपी खोज्छु छिटो र सजिलो। यो तयार गर्न तीन विकल्पहरू छन्; एक गिलास जार मा पहिले नै तयार सेम किन्नुहोस्। वा स्पीड कुकरमा बीन्स पकाउनुहोस्। र तेस्रो विकल्प तिनीहरूलाई Thermomix® मा पकाउन हुनेछ। यो अन्तिम विकल्पले हामीलाई लामो समय लिनेछ, त्यसैले एक पटक र कुनै नजिरको लागि, म पहिलो दुई विकल्पहरू मध्ये कुनै एक प्रयोग गर्न सिफारिस गर्दछु ... सबै कुरा समय र ऊर्जा बचत गर्न हो !!
म तपाईंलाई सिफारिस गर्दछु कि यो प्रयास गर्नुहोस्, यससँग छ चिल्लो बनावट र एक नाजुक स्वाद।
1 ब्रेटन क्रीम
फलफूल र तरकारीहरू को बारे मा सबै राम्रा कुराहरु संग एक क्रीम।
कुल समय: 15M
G० ग्राम काटिएको चुच्चो
२०० ग्राम पकाइएको सेतो सेम
300 g कुखुराको ब्रोथ
ल्याक्टोज-मुक्त दूधको g० ग्राम
हामीले काटेको लीक गिलासमा राख्यौं र प्रोग्रामिङ काट्छौं Seconds सेकेन्ड, गति 3। हामी गिलासमा अड्किएका टुक्राहरूलाई कम गर्छौं।
मक्खन थप्नुहोस् र को लागि sauté Minutes मिनेट, भेरोमा तापमान, गति २।
पकाएको सेतो सेमहरू थप्नुहोस्, तिनीहरूमध्ये एक दर्जनलाई सजावट गर्न आरक्षित गर्नुहोस्। हामी शोरबा, नमक र काली मिर्च र कार्यक्रम पनि थप्छौं Minutes मिनेट, भेरोमा तापमान, गति २।
समय पछि, हामी नोजल र कार्यक्रम मार्फत दूध खन्याउछौं Minutes मिनेट, १००º, गति १।
हामीले गिलासलाई तापमान गुमाउन दियौं। जब यो 80º सम्म पुग्छ हामी यो सबै समयमा पीस्छौं Seconds० सेकेन्ड, प्रगतिशील गति 20-5-7।
टोस्ट गरिएको रोटीको टुक्रा, आरक्षित बीन्स र सजावटको लागि अतिरिक्त कुमारी जैतूनको तेलको थ्रेड प्रयोग गरेर तातो सेवा गर्नुहोस्।
मुहान - फूलगोभी क्रिम, मासु पाई र भुनी एप्पल एन प्यापिलोटको साथ पूरा मेनू
स्रोत - Thermomix® Magazine बाट परिमार्जन गरिएको रेसिपी
अन्य रेसिपीहरू पत्ता लगाउनुहोस्: Celiac, तरकारीहरू, १/२ घण्टा भन्दा कम, सूप र क्रिम
लेखको पूर्ण मार्ग: थर्मोरसेटास » थर्मोमिक्स रेसिपीहरू » तरकारीहरू » ब्रेटन क्रीम
एन्जेला आरडी भन्यो
टमाटर, काटिएको प्याज, र क्यान्ड टूनाको साथ मकरोनी भन्दा सजिलो केहि छ? ? राम्रो (मकारोनीसँग गोप्य कुरा छ। ती केमा उमालेको छ?)
एन्जेला आरडीलाई जवाफ दिनुहोस्
उम्म मम्म् ... ठीक छ म तपाईंलाई भन्दछु त्यहाँ धेरै धेरै सजिलो रेसिपीहरू छन् ... विशेष गरी जब तपाईं तिनीहरूलाई थर्मोमिक्सको साथ बनाउनुहुन्छ। निस्सन्देह ती मध्ये एक होममेड सॉसको साथ म्याक्रोनी हो। अधिक जान्नको लागि म तपाईंलाई सल्लाह दिन्छु: http://www.thermorecetas.com/2011/05/18/receta-facil-thermomix-macarrones-con-atun/
बोर्डो कठोरता भन्यो
मैले देखेको छु कि तपाईंले सामग्रीहरूमा "ल्याक्टोज-मुक्त दूध" राख्नुहुन्छ? -केही कारणले तपाई ल्याक्टोजसँग राख्न सक्नुहुन्न? तपाईं ल्याक्टोज-रहित दूध कहाँ पाउन सक्नुहुन्छ? -
धन्यबाद, र मेरो अज्ञानता XD माफ गर्नुहोस्
ARNESTO BordOY लाई जवाफ दिनुहोस्
पक्कै तपाईं ल्याक्टोज संग गर्न सक्नुहुन्छ! ... समान मात्रा मा सामान्य दूध प्रयोग गर्नुहोस्।
आज ल्याक्टोज-मुक्त दूध कुनै पनि सुपरमार्केटमा फेला पार्न सकिन्छ ... कुनामा पनि !!
यो राम्रो देखिन्छ, म तेल माखन प्रतिस्थापन गर्न सक्छ? मापन उस्तै हुनेछ? धन्यबाद
प्रतिस्थापन सम्भव छ तर तपाईंले परिमाण कम गर्नुपर्नेछ। म १ 15 वा २० ग्राम तेल मात्र राख्छु।
तपाईं मलाई भन्नुहुनेछ!
अर्को प्रश्न, किन ल्याक्टोज-मुक्त दूध?
राम्रो हेर ... यो मेरो श्रीमान ल्याक्टोज असहिष्णु हो कि बाहिर जान्छ। आजकल यो समस्या छैन किनकि त्यहाँ पहिले नै सबै प्रकारका ल्याक्टोज-मुक्त दुधहरू छन् ... स्किम्ड, अर्ध वा पूरै। तपाईंले उस्तै रकममा अर्कोको लागि परिवर्तन गर्नुपर्नेछ।
मी joase भन्यो
मलाई लाग्छ कि यो महान छ, के तपाईंलाई यो छोलेको साथ बनाउन सकिन्छ जस्तो लाग्छ?
जवाफ दिनुहोस् joase
नमस्ते मी joase:
पक्कै पनि तपाईं यसलाई छोलेको लागि परिवर्तन गर्न सक्नुहुनेछ तर त्यसपछि यो अब ब्रेटन क्रीम हुनेछैन। ; पी
धन्यबाद, मसँग पहिले नै आजको मेनू छ, मलाई के खाना पकाउने थाहा थिएन र तपाइँसँग यो सँधै सजिलो हुन्छ।
तपाईको टिप्पणीका लागि धेरै धन्यबाद तर मैले स्वीकार गर्नु पर्दछ कि त्यस्ता सहभागीहरु संग व्यंजनहरु साझा गर्न पाउँदा खुशी लाग्छ !!
तपाईको टिप्पणी को लागी धेरै धन्यबाद!
बहादुर स्वर्गदूतहरू भन्यो
सबैलाई नमस्कार, मैले गत बिहिबार यो शानदार क्रीम बनाएँ, यसको बारेमा भन्दै यसमा अद्भुत स्वाद छ, धेरै सजीलो बनाउनको लागि छिटो छ र धेरै पौष्टिक, विशेष गरी हामी जो बच्चाहरू जन्माउँछौं। मैले फ्राइड रोटीलाई टुक्राटाक्रीमा राखेको छु र तेलको एक थोपरो, वास्तवमै, कोसिस गर्नुहोस् किनभने यो आनन्द हो।
तपाईको धेरै राम्रा रेसिपी को लागी धन्यवाद
एन्जलस ब्राभोलाई जवाफ दिनुहोस्
हे एन्जिल्स ... तपाईले भनेको कुरा सुन्न म कस्तो मन पराउँछु!
तपाईको टिप्पणीका लागि धेरै धन्यबाद ... आउनुहोस् हामी यसलाई तयार पार्न बढी व्यक्तिहरूलाई प्रोत्साहित गर्न सकिन्छ कि भनेर हेरौं!
इवा मारिया भन्यो
नमस्ते साथीहरु!! यो रेसिपी एकदम राम्रो छ, मैले यसलाई अर्को दिन पनि बनाएको थिएँ र मलाई यो धेरै मन पर्यो किनकि सेतो गेडीहरू मेरो कडा सूट होइनन् यसैले मैले यसलाई राम्ररी खाईदिएँ !! नुस्खा को लागी धन्यवाद !! चुम्बनहरू
ईवा मारियालाई जवाफ दिनुहोस्
नमस्ते इवा मारिया,
मलाई खुशी छ कि तपाईंले क्रीम बनाउनको लागि प्रोत्साहित गर्नुभयो र तपाईंलाई यो मनपर्‍यो !!
मैले भर्खरै यो बनाएँ र यो धेरै स्वादिष्ट छ तर यो निकै तरल बाहिर आउँदछ, व्यावहारिक रूपमा गिलासबाट पिउन।
धेरै राम्रो, तर बहेको हुन सक्छ म दुधको रकम संग गलत थियो ...
म यसलाई सुधार गर्दछु कि भनेर अर्को हप्ता यो अर्को हप्ता गर्नेछु 🙂
अभिवादन र नुस्खा को लागी धन्यवाद
यसले मलाई तर आश्चर्यचकित गर्दछ कि यो तरल भएको छ किनकि वास्तवमा यसले धेरै तरल पदार्थ पनि बोक्दैन। साथै सिमीहरु धेरै बाक्लो छ।
तपाईले भनेको जस्तै, तपाईले राख्नु भएको दूधको मात्रा जाँच गर्नुहोस् र यदि तपाईको समस्या यथावत् छ भने, मलाई बताउनुहोस् र हामी तपाईको समाधान खोज्नेछौं।